Iskudhinimada iyo Iskuulka Ruuxu marnaba ma kulmi karaan. Mid ka mid ah labadaba waa la waayaa; ma jirto meel labadaba.
Hoogaa, waa in dhammaan dadka Alaya, ay la mid yihiin kuwa weyn, oo leh, Alaya waa in ay wax yar ka faa'iidaystaan!
Bal eeg, sida dayaxa loo arko oo kale, oo leh muraayadaha samooyinka oo keliya, oo caanonuug korkooda qulqulaya, oo dhererkiisu waa qaali uu ku dhex shaqeeyaa jannada, waana mid aan waxba tarayn. Hoogaa in yar tahay in ay faa'iido u tahay hadiyadda, qadarka qiimaha dhabta ah ee barashada, fikradda saxda ah ee waxyaalaha jira, aqoonta kuwa aan jirin!
- Codka aamusnaanta.
AS eraygu wuxuu tilmaamayaa, "walax" waa midka hoos yimaada ama taagan. Taas oo ah walax hoosaadka, ama hoosta ka muuqda, waa caalamka la iftiimiyay.
Ereyga, "mulaprakriti," sida ay u adeegsan jireen Aryaanka qadiimiga ah, waxay muujinayaan macnaha u gaar ah xitaa kaamil ah oo ka sarraysa walaxda ereyga. "Mula" macnaheedu waa xididka, "Prakriti" dabeecadda ama arrinta. Mulaprakriti waa, haddaba, in asalka ama asalka kaas oo dabeecadda ama arrintu ka timaaddo. Waxay ku jirtaa dareen tan aynu isticmaalno walaxda ereyga.
Maandooriyaha waligeed waa mid daa'im ah. Waa isha iyo asalka guud ee muuqaalka. Maandooriyaha waxaa suurtagal ah in la aqoonsado, oo markaa noqoto, miyir. Maaddadu maaha arrin, laakiin xididkuna ka yimaadaa biyaha. Maaddadu waligeed ma muuqato dareenka, sababtoo ah dareemada ma fahmi karto. Laakiin iyada oo la fiirsanayo maskaxda ayaa laga yaabaa in ay u gudbiso xaaladda walaxda oo ay u aragto. Waxa la dareemo dareenka ma aha walax, laakiin qaybta hoose ee dhaqdhaqaaqa ugu hooseeya ee walaxda, kala duwanaanshahooda kala duwan.
Maqnaanshaha maandooriyaha oo dhan marwalba way joogtaa. Maqnaanshaha weligeed ah ee maaddada waa mawduuc isku mid ah. Mooshinka is-hortaaggu wuxuu sabab u yahay muujinta walaxda iyada oo loo marayo ujeedooyinka kale. Maandooriyuhu had iyo jeer waa isku mid, sida walax, laakiin waxaa loo tarjumay muraayad guud oo ku salaysan ruuxa. Xaaladda ruuxu waa mid atomi ah. Xaaladda ruuxu waa bilowga caalamka, dunida iyo ragga. Iyada oo ay ku xiran tahay isdhexgalka jilitaanka ra'yiga waxa lagu turjumay xaalado ama xaalado gaar ah. Mid waliba wuxuu noqonayaa laba, oo labaduba waxay ku adkaanayaan inta lagu jiro xilliga caadada. Laga soo bilaabo ugu caansan xagga maaddooyinka ugu badan ee ka soo jeeda qulqulka hoose ee wareegga, ka dibna dib ugu noqo dhaqdhaqaaq guud.
Mawduuca ruuxu wuxuu ka dhigan yahay labada dhinac ee istiraatiijiga ah, ama cirbadaha, soo bandhigaan dhammaan muuqaalada. Marka ugu horeysa ee laga saaro maaddada wax-qabadka maaddada ayaa u muuqata sida ruuxa. Kii toddobaadna waa inuu ka baxaa dibadda ama hoos u dhacaa waa arrimahayaga guud. Mawduucani waa tan oo ah walaxda, oo la guuray, la dhejiyey, oo qaabeeya jeebka kale ee laftiisa oo loo yaqaan spirit. Ruuxu waa shay walxaha ka mid ah oo dhaqdhaqaaqa, tabarucaya, iyo qaababka kale ee laftirkiisa oo loo yaqaan 'matter'.
Dhaqdhaqaaqa dibadda ama hoos udhaca maalka, kaas oo hadda ah maskaxda laba-geesoodka ah, waa la riyaaqay, oo la siiyay jihada, dhaqdhaqaaqa iyo jilitaanka, ka soo jeeda boqortooyooyinka hoose illaa ragga, iyadoo loo marayo dhaqdhaqaaqa. Haddii arrintu ay noqoto mid isku dheelitiran oo isku dheelitiran, waa isku midka ah dhaqdhaqaaqa, taas oo ah qaabka ugu sarreeya ee walxaha miyir-qabka ah, oo ah mid aan la noolaan karin, oo muuqaal ah, iyo ilaah. Haddii, si kastaba ha ahaatee, dhaqdhaqaaqa maskaxeed ama falanqayntu waxay ku guul darraystaan ​​inay noqdaan kuwo isku dheelitiran oo lagu aqoonsado dhaqdhaqaaqa is-kaashatada, marwalbana mar kale ayaa maraya maraya marxaladaha soo noqnoqonaya ee soo noqnoqoshada iyo horumar.
Jidh kasta ama foomka waa gaadiidka mabda'a kor ku xusan, waana inuu noqdaa mabda'a wargalinta jirka ama qaabka hoose. Horumarka ruuxi ah wuxuu ka kooban yahay isbedelka arimaha ka hooseeya illaa heerarka sare; dhar kasta oo gaar u ah gaadhi loogu talagalay falsafadda ama muujinta miyirka. Qarsoodiga ah dardargelintu ma aha in la dhisayo oo ku xirnaado meydka ama qaababka, laakin qiimeynta baabuurka oo kaliya sida habka loo gaari karo shayga ugu dambeeya ee dhammaan dadaalka-miyir-qabka.
Miyir-qabka maaha mid ka duwan mid ka mid ah buro dhoobo ah marka loo eego badbaadiye dunida. Miyir looma beddeli karo, sababtoo ah waa isbeddel. Laakiin baabuurka oo loo marayo miyir-qabka ayaa la beddeli karaa. Sidaas darteed arrintani waxay ku jirtaa xaalad jireed iyo foom uusan awood u lahayn inay ka fikirto oo ay muujiso miyir ahaan sida dharka Buddha ama Masiixa.
Jaamacaduhu waxay yimaadaan oo tagaan sida maalmo aan xadidnayn, si arrintu ay uga shaqeyn karto gobolka ugu fudud oo aan horumarsanayn ilaa heerka ugu sarreeya ee sirta ah: laga bilaabo dhalashada cammuudda ama dabeecadda, oo aan magacaaga ahayn. Ujeedada kaliya ee ku-soo-gelinta walaxda sida ruuxa arin-u-qaabka ah, iyo horumarinta maskaxda-arrinta walaxda waa: Gaaritaanka Miyir qabka.